10 ama ama Anabolic Steroids Raw ntụ ntụ na 2019
Anyị niile kwenyere na iwulite ahụ bụ otu n'ime ihe ochie kachasị mma iji meziwanye ọdịdị mmadụ, ọkachasị ụmụ nwoke. Ọ bụ ezie na onye ọ bụla na-akụrisị mgbatị ahụ na nsonaazụ dị iche achọrọ. Maka ụmụ nwanyị, mweghachi nke ụdị nwanyị mara mma bụ atụmanya dị mkpa site na ịmechara ahụ. Agbanyeghị, iji mezuo nke a, ị ga - ahọrọ nke ọma Anabolic Steroids (AAS) imezu ihe ichoro.
Anyị mepụtara ntuziaka onye ahịa a jupụtara na ndụmọdụ na ndụmọdụ ndị dị elu iji nyere gị aka ịhọrọ nke zuru oke Ihe anabolic Steroids (AAS).
A na-ere ire ere Ndị na-arịa ọrịa oyi Materials kasị Igba ama ama Ndị na-arịa ọrịa oyi Materials Best Oral Steroids Raw Materials
Testosterone Enathate / Nyocha E
Ihe mere anyi ji were ya:
Nnukwu ahịa steroid na-ere ahịa sitere na anyị n'afọ ndị gara aga
Ndị steroid dị mkpa na-atụ aro nke ukwuu
Thedị steroid kachasị dị mfe ma dị ọnụ ala
Steroid ndị a na-ejikarị emekọrịta n'ahịa.
Ngwakọta Tren kachasị ewu ewu n'etiti ndị na-eme egwuregwu
Trenbolone Acetate siri ike karịa Trenbolone Enanthate n'ihi Enanthate ester na-eburu ọtụtụ uka na ogige ahụ.
Ọtụtụ n'ime ndị ọrụ na-aga na Trenbolone homonụ bụ Trenbolone Acetate mgbe niile.
A na-enweta steroid ndị ka mma ndị ahịa
Dianabol nwere ike ịba ezigbo uru maka oke ụlọ.
Mmetụta Dianabol dị mfe ijigide ngwa ngwa mgbe ejirila ịkwụsị iji steroid.
Tulee ọnụahịa More Details Tulee ọnụahịa More Details Tulee ọnụahịa More Details
Lee Ndi Anabolic Steroid Na-ewu ewu nke 10:
Aha anabolic Steroid kachasị ewu ewu
Nhọrọ steroid kachasị ewu ewu bụ:
Dianabol ntụ ntụ (methandrostenolone)
Deca Durabolin (ntụ ọka nandrolone decanoate)
Winstrol ntụ ntụ (stanozolol)
Aha Anabolic Steroid kachasị dị irè
Site na ọkwa onye ọrụ, steroid ndị kachasị dị irè bụ:
Trenbolone ntụ ntụ (onye mmeri doro anya)
Uto Hormone mmadụ (HGHraw)
Ghọta Differentdị Anabolic Steroid
E nwere nkọwapụta ole na ole dị mkpa ịchọrọ maka mgbe ị na-ahọrọ Anabolic Steroid. Can nwere ike ịmalite site na iji ebumnuche dị iche iche were bulie nke kacha mma maka onwe gị.
Ndị mmadụ na-ahọrọ ụdị dị iche iche maka ebumnuche dị iche iche:
stecking steroid maka ike akwara
arụmọrụ steroid maka ike na ntachi obi
ịkpụ steroid maka abụba ọkụ
Ihe ndị ọzọ eji eme ihe gụnyere ịgwọ ọrịa na mgbake na nkwalite metabolism.
Maka nzube ahụike na iwu na-akwadoghị, enwere ike iwere AAS:
ka etinyere n’arụ n’ahụ
site na ogwu ogbugba
site na akpụkpọ ahụ ka ude ma ọ bụ gel
A na-ewere ọnụ n'ụdị ọnụ. Ha gụnyere:
Mesterolone (ntụ ntụ Proviron)
Methandienone (Dianabol ntụ ntụ)
Oxandrolone (ntụ ntụ Anavar)
Oxymetholone (ntụ ntụ Anadrol)
Stanozolol (Winstrol ntụ ntụ)
Dị injectable gụnyere:
Trenbolone Acetate ntụ ntụ
Akụrụngwa Boldenone na-apụbeghị n'anya (Equipoise)
Methenolone enanthate ntụ ntụ (Primobolan)
Nandrolone decanoate ntụ ntụ (Deca Durabolin)
Tụlee Steroid Anabolic Kacha ewu ewu na 2019
Product aha Testosteorne Enanthate ntụ ntụ Dianabol ntụ ntụ Trenbolone Acetate ntụ ntụ Anavar (Oxandrolone) ntụ ntụ Stanozolol ntụ ntụ Human Hoorm Hormone raw Nandrolone Decanoate ntụ ntụ Boldenone Undecylenate raw Drostanolone Propionate ntụ ntụ Methenolone Enanthate ntụ ntụ
Ịcha ◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆◆◆ ◆◆◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆ ◆◆◆◆ ◆◆◆◆ ◆◆◆◆◆ ◆◆◆◆◆
mmetụta ◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆ ◆◆ ◆◆◆ ◆ ◆◆◆ ◆◆◆◆ ◆◆ ◆
Nyocha Nyocha Anabolic Steroid nke Kasị Niile
Steroid ndị kachasị ewu ewu
1: Testosterone ntụ ntụ
Testosterone bụ steroid anabolic bụ isi nke ahụ gị mepụtara n'ezie. Ugbu a ezie na steroid a doro anya na-enyere aka ịkpụ ahụ akwara na ike ị nwere ike, ọ bụ ọrụ dịịrị maka ụmụ nwoke ndị ọzọ dịka olu gị na ntutu ihu gị. Mgbe ejiri ya dị ka ọgwụ na-eme ka nkwalite arụ ọrụ, Testosterone ga-enyere mmụba nke ike gị ike, belata mmebi akwara, ma nwekwuo mgbake muscle.
Testosterone nwere ogologo anụ na-egbu oge
Nnukwu ewu ewu
Mostdị ndị a na-ahụkarị iji ụwa niile site na imeziwanye ndị na-eme egwuregwu
2: Trenbolone ntụ ntụ
A na-ahụkarị Trenbolone dị ka otu n'ime steroid anabolic siri ike mgbe ọ bụla. N'ezie, ọ dị ike okpukpu ise karịa testosterone n'ihi ngbanwe androgenic nke 500 na 500 ma e jiri ya tụnyere nke 100 na 100. Maka ndị na-ahụ maka anụ ahụ, ọkachasị, nke a bụ ọgwụ steroid a ma ama naanị n'ihi otu ha nwere ike isi tinye ngwongwo na ike. Ọ na-eritekwa uru maka ndị chọrọ ịmịcha abụba ngwa ngwa karịa ka ha ga-eme.
Ester dị obere nke Trenbolone
A na-atụkarị aro inpa kwa ụbọchị
Nke kacha baara ndị na-achọ uru ọsọ ọsọ
3: Anavar (Oxandrolone) uzuzu
Anavar na-anọchite anya otu n'ime steroid anabolic na-ewu ewu nke oge niile, nke a bụkwa n'ụzọ dị ukwuu n'ọdịdị ya nabatara nke ọma. Nke a bụ otu n'ime steroid anabolic ole na ole nke ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị nwere ike iji rụọ ọrụ ọ bụla, ọ bụkwa otu n'ime mmetụta kachasị mma na enyi. Agbanyeghị, na ụfọdụ okirikiri Anavar enweghị ekele dị ukwuu n'ihi ọdịdị dị nro ya, mana nke a bụ kpamkpam n'ihi atụmanya na-enweghị isi.
Steroid ndị anabolic na-ewu ewu n'oge niile
Nke kpatara kariri ọdịdị anabataghi ya
Ole na anabolic steroid nke umu nwoke na ndi nwanyi gha eme
Nke ukwuu enweghị ekele n'ihi ụdị ịdị nwayọọ ya
4: Nandrolone Decanoate ntụ ntụ
Nandrolone Decanoate bụ otu n'ime steroid anabolic na-ejikarị n'etiti arụmọrụ na-eme ka ndị na-eme egwuregwu dị elu. A maara ya nke ọma maka ịbụ nnukwu steroid steepụ oge, mana ọ bụkwa ihe kachasị amasị n'ọtụtụ egwuregwu maka uru ọgwụgwọ ọgwụgwọ ya. N'ihi nnukwu ọgwụgwọ ọgwụgwọ ya, hormone Nandrolone bụ otu n'ime steroid anabolic bara uru na omume ahụike.
Steroid anabolic a na-ejikarị n'etiti ndị na-eme ka egwuregwu dịkwuo elu
A maara nke ọma ịbụ onye bara nnukwu uru steroid n'oge
Otu n'ime steroid anabolic bara uru na usoro ọgwụgwọ
Boldenone Undecylenate bụ testosterone ewepụtara anabolic androgenic steroid ma bụrụkwa usoro na-agbanwe nke testosterone. Ọ bụ obere mgbanwe na mgbakwunye abụọ agbakwunyere na carbon otu na ọnọdụ abụọ. Undecylenate ester na-enye ohere maka nnwepụta kachasị elu na Boldenone ihe dị ka ụbọchị 3-4 ụbọchị mgbe ogwu ogbugba gasịrị, na-ewepụta nwayọ na-aga n’ihu, na-esochi ụbọchị 21.
Akụkụ kachasị mma nke steroid a bụ ike inye aru
Nna nna nke ndi anabolic steroid niile
Otu n'ime steroid ndị tụkwasịrị obi site n'aka ndị egwuregwu egwuregwu na ndị na-ahụ maka ozu
6: Dianabol ntụ ntụ
Dianabol na-anọchite anya otu n'ime ndị kachasị ewu ewu na otu n'ime steroid anabolic kasị mkpa oge niile. Enweghị ajụjụ, nke a bụ steroid a na-ahụkarị ọnụ na-adabara ahịa na otu n'ime steroid kachasị ewu ewu n'ụdị ọ bụla. Ọ bụ ezie na a na-ahụkarị ya dị ka mbadamba ihe e dere ede, a pụrụ ịchọta Dianabol ka ọ bụrụ ụzọ a ga-esi agwọ ya, ma mbadamba nkume ndị ahụ na-anọchi anya ụzọ isi nchịkwa.
Steroid ndị anabolic kachasị mkpa n'oge niile
Onye na-ewu ewu ọgwụ steroid kachasị ewu ewu ịre ahịa
Ọtụtụ ndị na-atụ aro steroid ndị Arnold na-atụkarị
7: Stanozolol ntụ ntụ
Ọ bụ ezie na otu n'ime steroid anabolic ndị a ma ama karị, Stanozolol bụ ihe ama ama n'etiti ọtụtụ ndị na steroid site na iji ọnụ ọgụgụ mmadụ. Ọ bụ n'ọtụtụ ụzọ steroid anabolic dị nro ka nke ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị ga-eji. Ọ dịkwa oke mkpa, ọ nwapụtala na ọ dị mma maka ọtụtụ nkwalite arụmọrụ.
Ihe amara steroid nke anabolic nke ọma
Ndị a ma ama n'etiti ọtụtụ ndị dị na steroid n'iji ọnụ ọgụgụ mmadụ
Anabolic steroid nke ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị nwere ike iji ha mee ihe n'enweghị nsogbu
Dị oke arụmọrụ maka ọtụtụ nkwalite arụmọrụ
8: Hormone Hormone raw nke mmadụ
Hormone mmadụ, bụ homonụ protin nke ọ na-ewepụta ihe mgbu ahụ. Ọ bụ mmadụ dị ndụ mepụtara ya, ọ nọkwa n’ọkwa kachasị elu n’oge ọ bụ nwata. HGH na-anọchite anya otu n'ime homonụ kacha mkpa na ahụ mmadụ dịka ọ na-emetụta ọkpụkpụ anyị, akwara nke akwara na akụkụ ahụ ya, yana ọ na-arụ ọrụ n'ọtụtụ ebe ndị ọzọ na ahụ niile.
Homonụ protin na emeputara site na akuku aru
Ihe kachasị ewu ewu na steroid na-eji ọnụ ọgụgụ mmadụ
Homonụ kacha mkpa n’ahụ mmadụ
9: Drostanolone Propionate ntụ ntụ
Ọtụtụ ndị Masteron niile nọ n'ahịa ga-abụ Drostanolone Propionate. Drostanolone Propionate bụ dihydrotestosterone (DHT) anabolic steroid. Kpamkpam, Masteron bụ homonụ DHT nke etinyere n'ụzọ nhazi site na mgbakwunye nke otu methyl na carbon 2 ọnọdụ, nke a na-echebe homonụ site na mmebi metabolic site na XzyX-hydroxysteroid dehydrogenase enzyme, nke a na-ahụ na akwara ọkpụkpụ. Ọ na - eme ka ọdịdị anabolic nke hormone ahụ dịkwuo ukwuu.
Kacha ester nke Drostanolone nke ndị egwuregwu na-eme egwuregwu na ndị na-ahụ maka anụ ahụ ji
Kachasị androgenic osisi
Otu onye kachasị ewu ewu n’etiti ndị ahụ na-asọ mpi ma ọ bụ na-ele anya
n'ihi na a ịchọ mma mma ahụ
10: Methenolone Enanthate ntụ ntụ
A na-ahụta Methenolone Enanthate dị ka otu n'ime steroid anabolic na-adị nchebe na ahịa ma ọ na-ebu ọkwa nchekwa dị mma iji kwado ihe a. N’ezie, ejirila steroid a mee ihe nke ọma n’ịgwọ ụmụaka na-adịghị ndụ na ụmụ ndị ka bu n’afọ n’enweghị mmerụ ahụ. Edere ya maka osteoporosis na sarcopenia ..
A na-ejikarị ya mgbe ị na-egbu usoro, mgbe a na-enweta uru dị ukwuu
Steroid dị ogologo oge
Anabolic steroid nke na-enweghị atụ ma e jiri ya tụnyere ọtụtụ steroid anabolic steroid
Anabolic Steroids pụrụ ịdabere na ya ga-atụle tupu ịzụta
Mee nyocha ụdị Steroid dị iche iche
Nwere ike zụta steroids ntụ ntụ na ntanetị ngwa ngwa ma ziga ha n'ụlọ gị n'amaghị ama. Agbanyeghị, ịkwesịrị ịme nyocha tupu ịtụnye steroids ntụ ntụ. Nke mbu, chọpụta ma ị na - enweta steroid ndị ziri ezi. Ọ bụrụ na ịnwere ndị enyi na mgbatị ahụ na-eji steroids ntụ ntụ, chọpụta ndị ha na-eji ma jụọ ndị kachasị mma maka ndị mbido. I nwekwara ike juo ndumodu site n’aka ndi na ewuru aru ndi ozo n’ozi ntaneti.
Nyocha nyocha nke ụdị steroid dị iche iche ị nwere ike ịmasị na-aba uru. Karịsịa, ị kwesịrị ịchọpụta otú steroids ntụ ntụ si arụ ọrụ, ụdị nri yana mmemme mmega ahụ na-aga nke ọma na mmetụta ndị ọ ga-ekwe omume. Ọ bụrụ na ịnwee ọnọdụ dị adị tupu oge ahụ, chọpụta ihe ndị ga - ekwe omume ịdaba na iji otu steroids ntụ ntụ ị nwere ike ị gachara.
Họrọ Suppnye Onye Kwesịrị Ekwado steroid
Na China, enwere ọtụtụ ụlọ ọrụ na-emepụta steroid steroid maka ire. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ị na-azụta steroid steroid na ntanetị, ị gaghị enwe ike ijide n'aka nke mmeju a. Enwere nnukwu ụlọ ahịa dị n'okpuru ala maka steroids ntụ ntụ gburugburu ụwa na ọtụtụ ụlọ nyocha dị n'okpuru ala, ọkachasị site na Europe, nwere ike ibuga gị ọgwụ anabolic steroids iwu na-akwadoghị. Maka ahụike gị, ọ kacha mma ịtụ steroid steroids mma n'aka ụlọ ọrụ ama ama.
Anyị na Anyị Na-arụkọ Ọrụ, Anyị Nwere Ike Ime
A na-emepụta ngwaahịa anyị n'okpuru cGMP ma nwee ike ịchụcha mma ahụ.
Ezubere nke ọcha ka ekweghi nke 98%. COA; HPLC; Enwere ike ịnye akụkọ nyocha HNMR.
Ike anyị n’enye anyị kwụsiri ike ma wepụta usoro ịhazi oge niile.
Anyị nwere ahụmịhe bara ụba na ijere ahịa dị elu n'ụwa niile.
Soro ụlọ ọrụ anyị na-arụkọ ọrụ ọnụ, ị nwere ike belata ọnụego gị.
Anabolic Steroids Raw FAzụ Ajụjụ
Ajụjụ: Etu esi enye iwu n'ụlọ ọrụ gị?
1. can nwere ike izitere anyị akwụkwọ ịzụta gị na weebụsaịtị anyị ma ọ bụ na email anyị ([Email na-echebe]), anyị ga-ewepụta ya mgbe anyị nwetara.
2.Payment didand paracel rececel & address enyere.
3. A ga-ebugharị ngwongwo ya na ọnụ ọgụgụ nsuso, foto ngwungwu, nọmba nsuso yana ụbọchị ọbịbịa na-atụ anya.
4.Goods natara ma kwuo ihe.
Ajụjụ: Kedu usoro ịkwụ ụgwọ ụlọ ọrụ gị ga-anabata?
A: Nyefee Bank; Western Union; EgoGram; Bitcoin
Ajụjụ: Nlele nwere?
A: Ee, enwere ike izipu ọtụtụ ngwaahịa dị ka sampleti n’efu, mana ị ga-akwụ ụgwọ maka ụgwọ mbupu.
Ajụjụ: Kedu otu esi achọpụta ogo ngwaahịa tupu itinye iwu?
A: COA, HPLC, HNMR dị. A ga-enyekwa akwụkwọ nnwale site na labs ndị ọzọ n’oge ruo n’oge.
Ajụjụ: Kedu ka esi ekwe nkwa na ego m adịghị mma?
A: Enwere ike nkwụghachi ego ahụ tupu eziga ngwaahịa.
Ajụjụ: Kedu maka oge nnyefe?
A: N'ime 1 ~ 3 ụbọchị ọrụ mgbe nkwenye ụgwọ kwụrụ ụgwọ (ezumike China anaghị etinye).
Ajụjụ: Enwere mwepu ego ọ bụla?
A: Ee, maka oke buru ibu, anyị na-akwado ọnụahịa ka mma mgbe niile.
Ajụjụ: you nwere ike ijide n'aka nnweta dị?
A: Ikike anyị nye esiri ike ma dokwaa usoro ịkpụzi kwa oge.